Ch 13 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 13 John
13:1 Andro talohan'ny andro firavoravoana amin'ny Paska, Fantatr'i Jesosy fa nanakaiky ny fotoana, rehefa mandalo izy fa avy amin'izao tontolo izao ho any amin'ny Ray. Ary satria foana izy tia ny Azy izay amin'izao tontolo izao, dia tia azy hatramin'ny farany.
13:2 Ary rehefa ny sakafo efa nitranga, rehefa ny devoly efa efa nataony tao am-pon'ny Jodasy Iskariota, ny zanak'i Simona, mba hamadika Azy,
13:3 satria fantatrareo fa ny Ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tànany, ary dia tonga tao avy amin'Andriamanitra, ary handeha ho an'Andriamanitra,
13:4 dia nitsangana niala tamin'ny sakafo, Ary nanokana ny fitafiana, ary rehefa nahazo lamba famaohana, ka nofonosiny manodidina ny tenany.
13:5 Ary napetrany tao anaty rano marivo vilia baolina, ary nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famaohana izay ilay izy mifono.
13:6 Ary avy eo dia tonga teo amin'i Simona Petera. Ary hoy Petera taminy:, "Tompo ô, no hanasa ny tongotro?"
13:7 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Inona no ataoko, tsy izao mahatakatra. Fa ho fantatrareo izany avy eo. "
13:8 Hoy Petera taminy:, "Ary Sanatria raha hanasa ny tongotro!"Jesosy namaly azy, "Raha tsy hosasako ianao, anao dia tsy hisy tanteraka amiko izany. "
13:9 Simona Petera nanao taminy hoe:, "Ary ny Tompo, tsy ny tongotro, fa ny tanako sy ny lohako!"
13:10 Fa hoy Jesosy taminy: "Izay ihany no nanasa tokony hanasana ny tongo, ary avy eo dia ho tanteraka madio. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. "
13:11 Fa fantany izay hisy hamadika Azy. Izany no antony, hoy izy:, "Tsy madio avokoa."
13:12 Ary noho izany, rehefa nanasa ny tongotr'izy ireo, ary nandray ny fitafiana, rehefa nipetraka nihinana indray, dia hoy izy taminy: "Fantatrao ve hoe inona no nataon'izy ireo ho anao?
13:13 Ianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo, ka milaza soa: fa izany tokoa Aho.
13:14 Noho izany, raha, ny Tompo sy Mpampianatra, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra iray hafa.
13:15 Fianarana no nomeko anareo ohatra, ka dia toy ny nataon'izy ireo ho anao, toy izany koa no tokony hataonao.
13:16 Amen, amena, Lazaiko aminareo, the servant is not greater than his Lord, and the apostle is not greater than he who sent him.
13:20 Amen, amena, Lazaiko aminareo, whoever receives anyone whom I send, dia mandray Ahy. Ary na iza na iza mandray Ahy, receives him who sent me.”
13:21 I Jesosy, rehefa nilaza ireo zavatra ireo, dia nangorohoro ny fanahiny. Ary Izy no nitondra vavolombelona amin'ny hoe:: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa ny anankiray aminareo no hamadika Ahy. "
13:22 Noho izany, ny mpianatra iray nijerijery hafa, tsy azo antoka momba izay niteny.
13:23 Ary nitehina tamin'ny anilan'i Jesosy, no anankiray tamin'ny mpianany, ilay tian'i Jesosy.
13:24 Noho izany, Simona Petera nanofa amin'ny anankiray ka nanao taminy hoe, "Iza moa no dia miteny momba?"
13:25 Ary noho izany, nitehina tamin'ny vata 'i Jesoa, hoy izy taminy:, "Tompo ô, iza io?"
13:26 Jesosy namaly, "Izy no ho izay no hanitatra ny niara-nanatsoboka mofo." Ary rehefa nolemany ny mofo, dia nomeny an'i Jodasy Iskariota, zanak'i Simona.
13:27 Ary rehefa afaka ny sombin-kanina, Satana niditra tao aminy. Ary hoy Jesosy taminy:, "Inona no halehanao hanao, ataovy faingana. "
13:28 Ary tsy nisy tamin'izay nipetraka nihinana nahalala ny anton'ny nilaza izany taminy.
13:29 Fa ny sasany dia nihevitra fa, satria Jodasy no natao ny kitapom-bola, fa i Jesoa efa nilaza taminy, "Vidio ireo zavatra izay ilaina anay ho amin'ny andro firavoravoana ny andro,", Na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo.
13:30 Noho izany, rehefa nanaiky ny sombin-kanina, dia nivoaka avy hatrany. Ary efa alina ny andro.
13:31 Avy eo, nony efa nivoaka, Hoy i Jesosy: "Fa ny Zanak'olona efa nanome voninahitra, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy.
13:32 Raha Andriamanitra no ankalazaina eo aminy, Ary Andriamanitra kosa hankalaza Azy amin'ny tenany, ary hanome voninahitra azy avy hatrany.
13:33 Little lahy, fa fohy kosa, Izaho no momba anareo. Ary hitady Ahy, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy, 'Izay alehako, ianao Tsy tohanao ny handeha,'Toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny.
13:34 Omeko didy vaovao ianareo: Mifankatia. Toy ny nitiavako anareo, toy izany koa dia tsy maintsy mba hifankatiavanareo.
13:35 izany, rehetra dia manaiky fa mpianatro ianareo: raha toa anao dia tsy mifankatia. "
13:36 Simona Petera nanao taminy hoe:, "Tompo ô, handeha ho aiza ianao?"Namaly i Jesosy: "Izay alehako, ianao dia tsy afaka ny hanaraka ahy izao. Fa ianao kosa no hanaraka rehefa afaka izany. "
13:37 Hoy Petera taminy:: "Nahoana aho no tsy afaka manaraka anao ankehitriny? Izaho manolotra ny aiko ho anao!"
13:38 Jesosy namaly ka nanao taminy: "Ho manolotra ny ainy hamonjy ny ahy? Amen, amena, Lazaiko aminareo, ny akoho tsy maneno, mandra handà Ahy intelo ianao. "